PTTEP Myanmar Asset to move forward despite global oil price crisis amid Covid-19 | Myanmar Business Today
HomeInvestment & FinancePTTEP Myanmar Asset to move forward despite global oil price crisis amid...
PTTEP Myanmar Asset to move forward despite global oil price crisis amid Covid-19
COVID-19 ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးနူန်း အကျပ်အတည်းများဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း PTTEP မြန်မာ့စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၀ စီးပွားရေး စီမံကိန်းအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားမည်
လတ်တလော ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိနေသော COVID-19 ၏ ရိုက်ခက်မူများကြောင့် ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးကွက်မှာ အကျပ်အတည်းဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း PTTEP မြန်မာ့စီမံကိန်းသည် ကြိုတင်လျာထားချက်များအတိုင်း ၂၀၂၀ စီးပွားရေး စီမံကိန်း ကို ရှေ့ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကုမ္မဏီ အနေဖြင့် အနာဂါတ်တွင် ကြုံတွေ့ရမည့် စိန်ခေါ်မူများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ ဆိုင်ရာစီမံကိန်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ COVID-19 ကြောင့် မတ်လထဲကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ရေနံစျေးနူန်း ကျဆင်းမူ ၆၀ ရာခိုင်နူန်းခန့်ဟာ ယခုနှစ်အတွက် လျာထားတဲ့ PTTEP ရဲ့ ရောင်းအားပမာဏအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်ရိုက်ခက်မူ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယခုနှစ်အတွက် ကြိုတင်ရည်မှန်းထားတဲ့ တစ်နေ့လျှင် ရေနံစည်ပေါင်း ၃၈၈၀၀၀ ပျှမ်းမျှရောင်းအားမှာ ၅ ရာခိုင်နူန်းအောက်သာ လျော့နည်းနိုင်မယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး PTTEP ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မူ အများစုကို ကိုယ်စားပြုထားတဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ရောင်းချမူ ပမာဏကိုလည်း အရောင်းသဘောတူညီချက် စာချုပ်များအတိုင်း လုံလောက်စွာ ထုတ်လုပ်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းတော်တော်များများအတွက် သဘာဝဓါတ်ငွေ့စျေးနူန်းများကို ရောင်းဝယ်ရေးသဘောတူညီချက်များအတိုင်း ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ရေနံစျေးနူန်း ဆက်လက်ကျဆင်းမူဟာ ရှည်ကြာမယ်ဆိုရင် ပီတီတီအီးပီအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မူကတော့ အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ပီတီတီအီးပီ၏ ဥက္ကဌနှင့် အမူဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သော Mr.Phongsthorn Thavisin ကပြောသည်။
PTTEP မြန်မာ့စီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လိုအပ်ချက်များကို စာချုပ်ပါ ကတိကဝတ်များအတိုင်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ COVID-19 ပြန့်နှံနေသော ကာလအတွင်းတွင် ကူးစက်ပျံနှံမူကို ကာကွယ်ထားဆီးနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရမှ ချမှတ်ထားသော ညွန်ကြားချက်များနှင့်အညီ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ ဝန်ထမ်းများအားလုံးဘေးကင်း လုံခြုံရေး အစီမံများအားလုံးကို ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်တွင် (Work from Home) ကို ကျင့်သုံးလျှက်ရှိပြီး ကမ်းလွန်နှင့် ကုန်းတွင်း နေရာများတွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြဌာန်းထားသည်။
PTTEP Myanmar Asset issued an announcement that it remains confident to move forward with its operations in Myanmar as planned despite the current global oil price crisis and the spread of coronavirus (COVID-19). This is attributed to the implemented Business Continuity Management (BCM) plan to ensure uninterrupted gas supply to our buyers – MOGE and PTT. The company is ready to be flexible with its investment plan to cope with the challenging circumstances in the future.
“The pandemic COVID-19 and the global oil price collapse of over 60% since March would not makeasignificant impact on PTTEP’s sales volume this year. The average sales volume, 388,000 barrels of oil equivalent per day (BOED) previously targeted for this year is expected to decrease by less than 5% as sales volume of natural gas, which represents the majority of PTTEP’s products, has already been secured in accordance with the sales agreement,” Mr. Phongsthorn Thavisin, President and Chief Executive Officer of PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP), said.
Following the recent review of Zawtika current phase of 1A/1B/1C’s actual production, the overall performance indicates sufficient amount of reserves to fulfill the contractual obligation over an extended period of time. Therefore, PTTEP Myanmar Asset has decided to defer the procurement for the development phase 1D as there would be no impact to the production plan and to justify the project’s overall economic. PTTEP Myanmar Asset has reinforced its commitment to deliver gas production target to meet the requirements of both Myanmar and Thailand under the contractual terms.
In parallel, PTTEP Myanmar Asset has setavery high priority on preventing the spread of the Coronavirus (COVID-19) on its organization grounds and put safety measures and mitigation plans that comply with Government’s instructions to ensure everyone is safe during the COVID-19 outbreak. At Yangon office,aWork from Home (WFH) policy has been implemented, while safety measures continue to be strictly enforced at all operating sites, both offshore and onshore.
PTTEP Myanmar Asset’s General Manager, Mr. Piya Sukhumpanumet said “As the current Coronavirus (COVID-19) outbreak continues to impact the lives of people in Myanmar, and all over the world, I would like to reassure that PTTEP Myanmar Asset is closely monitoring the situation and will assess the risks continuously because the safety and security of our employee is the highest priority. PTTEP Myanmar Asset is ready to cooperate with the government and public sectors at all times.
PTTEP Myanmar Asset also reaffirms that there will be no disruption to the supply of natural gas to the Union of Myanmar, as we fight together to overcome this difficult situation”
Previous articleFactories to be inspected for workplace arrangement
Next articleGovt allocates K38 bln for oil and rice reserve